‘ललितपुरमा चिल्लो सडकमा हिड्न पाउने वातावरण तयार गर्नेछु’ « Lalitpur Khabar
वैशाख ३० गते हुने स्थानीय निर्वाचनका लागि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) को तर्फबाट ललितपुर महानगरपालिकामा मेयर पदको उम्मेदबार रहेका हरिकृष्ण व्यञ्जनकार बलियो प्रतिस्पर्धी हुन् । सत्ता गठबन्धनका उम्मेदवार चिरिबाबु महर्जनविरुद्ध एक्लै उभिएका व्यञ्जनकार २०७४ सालको स्थानीय निर्वाचनमा झिनो मतले पराजित भएका मेयरका उम्मेदवार व्यञ्जनकारसँग स्थानीय निर्वाचन र ललितपुरको विकासका सन्दर्भमा गरिएको कुराकानी :
ललितपुर महानगरमा विजयपछिको पहिलो योजना के छन् ?
भर्खरै उपत्यका भित्रिएको मेलम्ची खानेपानी आयोजनालाई व्यवस्थित गरी उचित वितरणमा लाग्नेछु । महानगरबाहिर रहेका विभिन्न मूल तथा बैकल्पिक पानीको स्रोत खोजी गरी महानगरबासीलाई पानीको समस्याबाट मुक्त बनाउँनेछु ।
मुलुकमा बढ्दै गइरहेको शहरीकरण र जग्गा प्लटिङ्का कारण पानीका मूलहरु सुक्दै गइरहेकाले जनताले भोग्नुपरेको चरम खानेपानी समस्या समाधानमा लाग्ने मेरो पहिलो योजना रहेको छ ।
यहाँ रहेको फोहरमैला व्यवस्थापनका लागि लाग्नेछु । ललितपुर महागरबाट मात्रै फोहर व्यस्थापन गर्न हाल लगभग रु १५ देखि २० करोड खर्च हुनेगरेको छ । सो खर्च न्यूनीकरण र उचित रुपमा फोहर व्यवस्थापनका लागि करिब पाँच करोड खर्च गरी फोहरलाई मोहरमा परिवर्तन गर्न सकिन्छ । सोबाट प्राप्त हुने उर्जाको प्रयोगबाट महानगरबासीकै हीत हुनेछ । यसैगरी गल्ने फोहरलाई मलमा परिवर्तन गर्ने महानगरभित्रका खेतीयोग्य जमिनमा प्रयोग गरी उत्पादनमा जोड दिनेछौं ।
स्थानीय निर्वाचनका क्रममा तपाईले घरदैलो अभियानमा महानगरवासीले कस्ता प्रश्न गरे ?
हामीले चुनावी अभियानमा प्रस्तुत गरेका विभिन्न एजेण्डाह पुरा गर्न स्थानीयहले अनुरोध गरेका छन् । महानगरका हरेक वडामा पानीको समस्या छ । स्थानीयहले पानी ल्याउन माग गरेका छन् । मैले पनि पहिलो निर्णय पानी वितरण सहज बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छु । पछिल्लो ५ बर्ष महानगरको क्रियाकलापबाट जनता खुसी छैनन् । त्यसैले स्थानीय तहको निर्वाचमा आफू विजय भएपछि पनि जनतामा नियमित रुपमा आउन माग गरिरहेको छन् ।
महानगरलाई व्यवस्थित बनाउने तपाईका कस्ता योजना छन् ?
महानगरका कच्ची सडक पक्की गरी हरियाली वृद्धि गर्नेछु । सडक विस्तार तथा मर्मत र ढल आदि व्यवस्थापन गरी चिल्लो सडकमा जनताले हिड्न पाउने वातावरण तयार गर्नेछु ।
महागरका ठाउँ ठाउँमा यातायात अवरोध हुने भएकोले छुट्टै पार्किङस्थलको व्यवस्था गर्नेछु । आवश्यक रहेका स्थानमा सडकपेटी निर्माण गर्नेछु ।
ललितपुर महानगरमा कला तथा संस्कृति संरक्षण गर्ने कस्तो योजना छन् ?
महानगरभित्रका बाहिर क्षेत्र मानिने सम्पदा वस्ती खोकना, बुङ्मती, हरिसिद्धि लगायतका पर्व र जात्राको संरक्षण र रेखदेखमा विशेष ध्यान दिनेछु । महानगरमा मुलुककै सबैभन्दा लामो रातो मच्छिन्द्रनाथको जात्रा, कृष्णजन्माष्टमी, भीमसेन खटजात्रा, मतया पर्व, तान्त्रिक नाचका साथै मुलुककै लामो कार्तिक नाच आदि मनाइने जात्रा संरक्षणमा ध्यान दिनेछु ।
यस महानगरमा धेरै मूर्त तथा अमूर्त कला तथा सांस्कृतिक सम्पदा छन् । यी कला संस्कृतीको संरक्षणको लागि महानगरमा अभियान चलाउनेछु ।
भौतिक पुर्वाधार निर्माणमा कस्ता योजना छन् ?
गत २०७२ सालको भुकम्पले भत्काएका तथा जीर्ण बनाएका सम्पदालाई समेत प्राथमिकतामा राखी अबको एक वर्षमा सो कामको थालनि गर्नेछु । १९९० सालको भूकम्पले विगारेका केही धरोहर अझै पुर्नर्मिाण गर्न बाँकी छ । त्यसलाई पूर्णता दिनेछु । त्यसैगरी सोको अलवा महानगर भित्र रहेका पाटीपौवा तथा ढुङ्गेधारा जीवित राख्न पानी रिचार्ज हुने व्यवस्था मिलाउनेछु ।
शैक्षिक क्षेत्रमा कस्ता योजना अघि बढ्नेछन् ?
हामीले महानगरमा व्यावसायिक शिक्षाको आवश्यक रहेको महसुस गरेका छौं । त्यसैले सोही प्रकारको शिक्षा लागु गर्ने योजना बनाएको छु । ललितपुर महानगर कला र संस्कृतिको धनि रहेको हुँदा कलाको विकासका लागि कला र संस्कृतिमा आधारित क्याम्पस खोल्ने सोचमा अघि बढेको छु । यसैगरी ललितपुर महानगरभित्र धेरै वर्गका मानिस रहेका हुँदा हामीले अध्ययनमा असाध्यै जेहेन्दार र गरिबी व्यक्तिको पहिचान गरी छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्नेछु ।
स्वास्थ्य क्षेत्रतर्फ सुधारका कुनै योजना छ की?
स्वास्थ्य मानिसको सबै भन्दा ठूलो धन हो । राम्रो स्वास्थ्यबिना मानिसको सुन्दर जीवनको कल्पनासमेत गर्न सकिँदैन । सो कुरालाई मनन गरी महानगरभित्र ७० वर्ष उमेर नाघेकाको हितमा निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार प्रदान गर्नेछु । सो उमेर समुहभन्दा तलका व्यक्तिको हितमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम अघि बढाउनेछु । नगरवासीको जीवन सरल बनाउन र स्वास्थ्य सेवा पहुँच पु¥याउन सो केन्द्र स्थापना गरिनेछ ।
यसैगरी महानगरका जनतालाई नियमित रुपमा स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । यसैगरी महानगरबासीको स्वास्थ्यको विषयलाई गम्भीर रुपमा लिदैं हरेक व्यक्तिको नियमित हेल्थ चेक अप गर्ने योजना बनाएका छौं । पछिल्लो समयमा धेरैले खाफ्नो खाजा र खानामा जंक फुड खाइरहेका छन् । यसले स्वास्थ्यमा प्रतिकुल प्रभाव पारिरहेको छ । त्यसैले पनि सबैको नियमित हेल्थ चेक अप गर्न सकेमा रोग गम्भीर अवस्थामा पुग्नु भन्दा अघि नै उपचार गर्न सकिन्छ । त्यसैले सबै महानगरबासीको कम्तिमा बर्षको १ पटक फुल बडी चेक अप गर्ने व्यवस्था मिलाउनेछु ।
ललितपुर महानगरको भौतिक पूर्वाधार र खेलकुद तर्फ तपाईको सोच के रहेको छ ?
म विजय भएको पाँच वर्षभित्र महानगरका हरेक सडक कालोपत्र हुनेछन् । यहाँका सडक आवतजावत गर्न अवरोध पु¥याएका घर मालिकसँग छलफल गरी सडक विस्तार पूरा गर्नेछु । सडक विस्तार गर्न आवश्यक रहेका ठाउँका व्यक्तिगत जमिनको मुल्याङ्कन गरी क्षतिपूर्तिको लागि पहल गर्नेछु ।
सामाजिक सुरक्षालाई महानगरले कसरी अघि बढाउछ ?
२०७४ सालको स्थानीय तहको निर्वाचमा मेयर पदमा विजय हासिल गरे भने राज्यले प्रदान गर्ने भत्तामा महिनाको रु ५०० महानगरपालिकाको तर्फबाट दिने घोषणा गरेको थिएँ । मैले महानगरको मेयर हुन नपाए का कारण त्यो कार्यान्वयन भएन । यस स्थानीय तहको निर्वाचमा म विजय भएपश्चात् एमालेले हरेक मुलुकवासीलाई अब प्रदान गर्ने भनिएको मासिक रु पाँच हजार पुग्ने वातावरण भएन भनेपनि ललितपुर महानगरपालिकाबाट थप गरी ५ हजार पुग्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दछु ।
महिलालाई दक्षता वृद्धि गर्ने तालिम दिइनेछ । उनीहरुलाई व्यवसाय संचालन गर्न निब्र्याजी ऋण महानगरले व्यवस्था गर्नेछ । उनीहरुको उत्पादनलाई महानगरले संकलन गर्दै बजारीकरणमा लैजाने योजना छ । युवालाई स्वरोजगार उद्योग व्यवसायमा संलग्न गराइ स्थानीय जनताको जीवन सबल बनाउनेछु ।
महानगरवासीको हित र सुरक्षाका लागि हरेक टोलमा सिसीटिभी तथा सडक बत्ती जडान हुनेछ । बालबालिकाको चेतनाशक्ति वृद्धि गर्न बाल व्रिmडास्थल, वृद्धवृद्धाको लागि विश्रामस्थल लगायत भ्रमणको समेत व्यवस्थापन मिलाउनेछु
महानगरमा सुशासन कायम गर्ने योजना कस्ता हुनेछन् ?
महानगरमा कर्मचारीको कामको मूल्याङ्कन गरी पुरस्कारका साथै दण्डको व्यवस्था हुनेछ । कर्मचारीलाई कामको आधारमा प्रोत्साहन गरिनेछ । महानगरमा कसैले भ्रष्टाचार गरेको ठहर भएमा कारवाही गरिनेछ ।
जनताले महानगरलाई तिरेको कर मेरै लागि हो भन्ने आवास गराउने गरी सोबाट त्यही वडामा केही रकम खर्च गर्ने व्यवस्था मिलाउनेछौं । जनताले तिर्ने करको दरको सट्टा दायरा बढाउनेछौ । महानगरभित्र रहेका जनताको आर्थिक अवस्था बिचार गरी कर छुटको समेत व्यवस्था गर्नेछौं ।
आत्म निभर अर्थतन्त्रमा महानगरबासीलाई अघि बढाउने कुनै खास योजना छन् कि ?
दैनिक भान्छामा प्रयोग हुँदै आइरहेको एलपी ग्यासँको दर बढ्दै जाँदा जनताको दैनिकी महँगै बन्दै गइरहेको छ उता देशको विजुली खेर गइरहेको छ । केही बर्षमा देशमा आवश्यकभन्दा बढी विद्युत उत्पादन हुँदैछ । सो विद्युत बाह्य बजारमा लानुभन्दा यही बजारमा प्रयोग हुने वातावरण बनाउनु जरुरी छ ।
समय र क्रमसँगै हामी पनि परिवर्तन हुनुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ महानगरवासीले विद्युतिय बस लगायत र विद्युतिय चुलो प्रयोगमा जोड दिनेछौं ।
महानगरभित्रका जनप्रतिनिधिको कार्यसम्पादन पारदर्शी बनाउन तपाईको योजना के के रहेका छन् ?
महानगरभित्र जनप्रतिनिधिको आचारसंहिता निर्माण गरी सोही अनुरुपको काम सुरु हुनेछ । बजेट निर्माण प्रकृयामा सबै जनप्रतिनिधिबीच छलफल अघि बढाएर मात्रै गर्नेछु । महानगरका वडा शक्तिशाली बनाइनेछं । वडा बलियो बनाउन आवश्यक नीतिगत व्यवस्था बनाइनेछ । महानगरमा विजयी भएर आउने जनप्रतिनिधिको कार्य पारदर्शी बनाउन सबैको सम्पति सार्वजनिक गरिनेछ ।
छिमेकी नगरहसँग कस्तो सम्बन्ध बनाउने योजना छ ?
ललितपुर महानगर र काठमाडौं महानगर एकआपसमा जोडिएका छन् । ललितपुरबाट काठमाडौं वा उताबाट यता आउन यातायातले जोडिनैपर्छ । यसैगरी बागमती नदिको सरसफाइसँग वा अन्य विकास निर्माणले दुवै महानगरलाई प्रभाव पार्दछ । एमालेबाट काठमाडौं महानगरमा उम्मेदवार रहेका केशव स्थापित र मेरो व्यक्तिगत सम्बन्ध पनि अत्यन्त सुमधुर भएकोले दुवै महानगरलाई उत्कृष्ट बनाउन हामी दुवैले कुनै कसर बाँकी राख्नेछैनौं । नगरपालिकासँग सिमा जोडिएका अन्य नगरपालिकाहसँग समन्वयमा विकास निर्माण अघि बढ्नेछन् ।
ललितपुर महानगरकाबासीमा तपाईले जित्ने आधार के हो ?
अहिले हामीसँग गठबन्धनका उम्मेदवार रहेका बाबुकाजी प्रधानलगायत धेरै साथीहरु एमालेमै छन् । यसैगरी नेकपा हुदा सँगै रहेकी मञ्जली शाक्य नै एमालेको उपमेयरको उम्मेदवार छिन् । हामीसँग निर्वाचनअघि पाँचौ हजार एमाले प्रवेश गरिसकेका छन् । हामीलाई अवको निर्वाचनमा विजयी भएको जनताले हेर्न पाउनुहुनेछ । उहाहरुको पछिल्लो ५ बर्ष विना विकास बस्नुप¥यो ।
मैले महानगरबासीलाई अघिल्लो निर्वाचनमा दिएको मतप्रति आभार व्यक्त गर्दछु । जालसाजीका कारण थोरै मतले मैले उहाँहरुको मतको हामीले रक्षा गर्न सकेनौं ।
वासुदेव थापा वासुदेव थापा नेकपा एमालेबाट सूर्य विनायकमा नगरपालिकाको मेयरका लागि उम्मेदवार भएर घरदैलो अभियानमा